Snapdragon 875 Chip နဲ့ထှကျလာမယျ့ Redmi K40 Pro — Anycall Mobile
Apple အနနေဲ့ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး 5nm Chip ဖွဈတဲ့ Apple A14 Chip ကိုမိတျဆကျခဲ့ပွီးနောကျ ဖုနျးထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီတျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့ရဲ့ Android Flagships ဖုနျးတှမှော Qualcomm ရဲ့ 5nm Flagship ကို သုံးလာတော့မယျလို့ ကွညောလိုကျပါပွီ။ ဒီကုမ်ပဏီတှထေဲက Redmi ကလညျး 5nm Chip နဲ့ဖုနျးတဈလုံး ကိုထုတျဖို့ရှိနတေယျလို့ Redmi ရဲ့ General Manager တဈဦးဖွဈတဲ့ Lu Weibing က Weibo မှာ Post တငျပွီး ကွညောလိုကျပါပွီ။
ဒီ 5nm Chip ဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 875 Chip ဖွဈလာနိုငျပွီး 2021 အစောပိုငျးမှာမိတျဆကျလာမယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီ SD 875 ကို ပထမဆုံးသုံးလာမယျ့ ဖုနျးဟာလညျး Q1 2021 မှာထှကျလာနိုငျပါတယျ။ ကောလဟလတှမှောတော့ Xiaomi နဲ့ Vivo ဟာ ဒီ Chip ကိုပထမဆုံးသုံးလာမယျလို့ သိထားရပါတယျ။
ဆိုတော့ ဒီ5nm Chip နဲ့ Redmi ဖုနျးဟာ ဘယျဖုနျးမြားဖွဈလာနိုငျလဲ?
နာမညျကွီး Leaker တဈဦးဖွဈတဲ့ Digital Chat Station အရ ဒီဖုနျးဟာ Redmi K40 Pro ဖွဈလာမယျလို့သိရပါတယျ။နောကျပွီး ဖုနျးဟာ SD875 ကိုသုံးလာမယျ့ ပထမဆုံး Redmi ဖုနျးလညျးဖွဈလာမယျလို့သိရပါတယျ။
အရငျတုနျးကထှကျထားတဲ့ ကောလဟလတှအေရ Redmi အနနေဲ့ K40 ကို ဒီနှဈကုနျလောကျမှာမိတျဆကျလာဖို့ရှိနပွေီး K40 Pro ကတော့ Q1 2020 မှာထှကျလာမယျလို့သိထားရပါတယျ။ K40 မှာ Snapdragon 775 Chip အသဈ ၊ Full-Screen Display ၊ Rapid Charger နဲ့ ပိုကောငျးတဲ့ Camera ပါလာဖို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
နောကျထပျ Xiaomi အနနေဲ့ Xiaomi Mi 20 (or Mi 11) Series ကို Feb 2021 မှာကငျြးပလာမယျ့ တရုတျ Spring Festival ( တရုတျနှဈသဈကူးပှဲတျော) မတိုငျခငျမှာ မိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။ K40 Pro ကတော့ March လမှသာမိတျဆကျလာဖို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ K40 နဲ့ K40 Pro ဖုနျးတှရေဲ့ တဈခွား Specs အပွညျ့အစုံကိုတော့သခြောသိထားရခွငျးမရှိပါဘူး။
Redmi K40 Pro မှာ Snapdragon 875 Chip ပါလာမယျ…
Apple အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5nm Chip ဖြစ်တဲ့ Apple A14 Chip ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ Android Flagships ဖုန်းတွေမှာ Qualcomm ရဲ့ 5nm Flagship ကို သုံးလာတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီကုမ္ပဏီတွေထဲက Redmi ကလည်း 5nm Chip နဲ့ဖုန်းတစ်လုံး ကိုထုတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ Redmi ရဲ့ General Manager တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lu Weibing က Weibo မှာ Post တင်ပြီး ကြေညာလိုက်ပါပြီ။
ဒီ 5nm Chip ဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 875 Chip ဖြစ်လာနိုင်ပြီး 2021 အစောပိုင်းမှာမိတ်ဆက်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ SD 875 ကို ပထမဆုံးသုံးလာမယ့် ဖုန်းဟာလည်း Q1 2021 မှာထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကောလဟလတွေမှာတော့ Xiaomi နဲ့ Vivo ဟာ ဒီ Chip ကိုပထမဆုံးသုံးလာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီ5nm Chip နဲ့ Redmi ဖုန်းဟာ ဘယ်ဖုန်းများဖြစ်လာနိုင်လဲ?
နာမည်ကြီး Leaker တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Digital Chat Station အရ ဒီဖုန်းဟာ Redmi K40 Pro ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီး ဖုန်းဟာ SD875 ကိုသုံးလာမယ့် ပထမဆုံး Redmi ဖုန်းလည်းဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။
အရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ ကောလဟလတွေအရ Redmi အနေနဲ့ K40 ကို ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပြီး K40 Pro ကတော့ Q1 2020 မှာထွက်လာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။ K40 မှာ Snapdragon 775 Chip အသစ် ၊ Full-Screen Display ၊ Rapid Charger နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ Camera ပါလာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
နောက်ထပ် Xiaomi အနေနဲ့ Xiaomi Mi 20 (or Mi 11) Series ကို
Feb 2021 မှာကျင်းပလာမယ့် တရုတ် Spring Festival ( တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်) မတိုင်ခင်မှာ မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ K40 Pro ကတော့ March လမှသာမိတ်ဆက်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ K40 နဲ့ K40 Pro ဖုန်းတွေရဲ့ တစ်ခြား Specs အပြည့်အစုံကိုတော့သေချာသိထားရခြင်းမရှိပါဘူး။